रुकुम घ’टनाले जन्माएको बद्री पंगेनीको ‘मेरी छोरी’ (भिडिओसहित) – Tufan Media News
९ पुष २०७७, बिहीबार ११:५२
जाजरकोटका न’वराज वि’कसहित पाँचजनाको ह’त्या भयो। ह’त्या गर्नुका का’रण थियो- उ’पल्लो जा’तको प्रे’मीकासँग वि’वाह गर्न जानु।
मल्ल थ’रकी युवतीको प्रे’ममा परेका नवराज उनलाई लिन भनेर अन्य साथीहरू लिएर रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका-८ सोती पुगेका थिए। तर, प्रे’मीलाई भ’गाएर घर फर्किनुपर्ने नवराजसहित उनका पाँच साथीले त्यही प्रा’ण त्या’ग्नु पर्‍यो। जा’तको नाममा घ’टेको यो पछिल्लो निकै ब’र्बरताको घ’टना हो।
हाम्रो स’माजमा यस्ता जा’तीय वि’भेदका घ’टना त दिनहुँ घट्’ने गरेका छन्। जातका नाममा छोरी चे’लीको वि’वाह हुन पाएको छैन्। भने उ’पल्लो जा’तमा विवाह हुँदा छोरी चे’लीले सा’ह्रै पी’डा बे’होर्नु परेको छ।
यस्तै जा’तीय वि’भेदका वि’रुद्ध गायक ब्रदी पंगेनीले हालै गीत ल्याए। जुन गीतले सकारान्तमक सन्देश पनि दिएको छ भने जा’तीय वि’भेद गर्नेलाई सचेत पनि गराएको छ।
कला चल्यो गला चल्यो मान्छे चलेन
तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्छे चलेन।
किन सम्धिनी मान्छे चलेन ?
किन सम्धी ज्यू भान्से चलेन ?
“यो जा”तीय वि’भेद र महिला हिं’सा वि’रुद्धको एउटा आवाज हो। जुन किसिमको अपेक्षा राखेको थिए, त्यही अनुसारको माया पाएको छु। त्यही मायाका कारण यस्तै सामाजिक विषयमा अर्को गीत ल्याउने तयारी गरेको छु।” गीतको सफलतापछि गायक बद्रीले भने।(देखापढी संग गरियको कुराकानी )